AYA Bank | ဧရာဝတီဘဏ်၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော CSR လုပ်ငန်းစဉ်များ(၂၀၁၅-၂၀၁၆)
AYA Current Account
AYA Foreign Currency Account
AYA Seafarer Saving Account
AYA Saving Account
AYA Interest Maximizer Account
AYA Loyal Account
AYA Premium Saving Deposit
AYA Fixed Deposit
AYA Education Loan
AYA Local Online Remittance Service
AYA International Money Transfer Service
AYA SWIFT Telegraphic Transfer
AYA Payment Order
AYA SimplePay Instalment Plan
World Travel Card (VISA Prepaid)
AYA Point-of-Sale Service (POS Service)
Online Payment Solution (E-commerce)
AYA Royal Banking
Corporate governance & report
Role of Board and Board Committees
Profile of Directors and Senior Management
Contact AYA Investor Relations
ဧရာဝတီဘဏ်၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော CSR လုပ်ငန်းစဉ်များ(၂၀၁၅-၂၀၁၆)
15 Jun ဧရာဝတီဘဏ်၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော CSR လုပ်ငန်းစဉ်များ(၂၀၁၅-၂၀၁၆)
Posted at 10:14h
in AYA CSR, CSR myanmar	by	AYA Editor
ဧရာဝတီဘဏ်၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော CSR လုပ်ငန်းစဉ်များအား မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲတွင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် မလိုအပ်ပဲစာရွက်များ အသုံးပြုခြင်းကိုလျှော့ချခြင်း အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ လျှပ်စစ်မီးများ အလေအလွင့်မရှိစေရန် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ရေများမလိုအပ်ပဲပိုလျှံစွာ အသုံးမပြုရေး Save Paper, Save Trees, Save The Environment အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအား ဧရာဝတီဘဏ် (ရုံးချုပ်) နှင့် ဘဏ်ခွဲများအား အသိပညာပေးစတစ်ကာများအား ဖြန့်ဝေကာ နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသည့် ကွန်ပျူတာများ၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာနှင့် တံခါးများတွင်တပ်ဆင်ကာ ပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်အား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဧရာဝတီဘဏ်အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဏ္ဍတွင် သာမကဘဲ လူမှုအကျိုးပြုနှင့် အသိပညာပေးကဏ္ဍများတွင်ပါ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီဘဏ်၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော CSR လုပ်ငန်းစဉ်များအား မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲတွင် အခြားစီမံချက်တစ်ခုအနေဖြင့် အမှိုက်များအား သီးခြားစီ ခွဲခြားစွန့်ပစ်ရန် ပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေဖြင့် အထွေထွေစွန့်ပစ်ရန် အမှိုက်ပုံးနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား စနစ်ကျစွာစွန့်ပစ်နိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ရှေးဦးစီမံချက်အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘဏ်ခွဲများတွင် အမှိုက်ပုံးများအားထားရှိကာ ဝန်ထမ်းများနှင့်လာရောက်သော ကာစတန်မာများအား အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်အား စတင်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဧရာဝတီဘဏ်အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဏ္ဍတွင်သာမကဘဲ လူမှုအကျိုးပြုနှင့် အသိပညာပေးကဏ္ဍများတွင်ပါ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
ဧရာဝတီဘဏ်၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော CSR လုပ်ငန်းစဉ်များအား မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲတွင် လုံခြုံဘေးကင်းစွာ ယာဉ်မောင်းနှင်ရန်နှင့် ထိုင်ခုံခါးပတ်များအား ယာဉ်မောင်းနှင်စဉ် သေချာ တပ်ဆင်ထားရန် အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်တစ်ခုအား ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ မတ်လ (၄)ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီဘဏ် ကျောက်တံတားဘဏ်ခွဲတည်ရှိရာ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းတွင် ဧရာဝတီဘဏ်ဧ။် Corporate Affairs Department မှ ဦးဆောင်ပြီး တူညီဝတ်စုံဝတ်ဝန်ထမ်းများမှ ဧရာဝတီဘဏ်သို့ လာရောက်ကြသော ကားပိုင်ရှင်များ၊ လမ်းမပေါ်တွင် ရပ်ထားသော ကားများထံသို့ သွားရောက်ပြီး မိမိတို့၏ အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်များအား ပြောကြားကာ ယာဉ်ပိုင်ရှင်နှင့် ယာဉ်မောင်းများမှလက်ခံပါက ၎င်းတို့၏ယာဉ်အနောက်ဖက်တွင် စတစ်ကာအား ကပ်ပေးခြင်းနှင့် ထိုင်ခုံခါးပတ်များ Seat Belt အား လက်ဆောင်ဝေငှခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါအသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ် ပြုလုပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဧရာဝတီဘဏ်အနေဖြင့် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဏ္ဍတွင်သာမကဘဲ လူမှုအကျိုးပြုနှင့် အသိပညာပေးကဏ္ဍများတွင်ပါ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
AYA Bank ၏ Customer များအတွက် Gala Dinner အား မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပJanuary 10, 2017AYA Bank အားအစဉ်တစိုက်အားပေးလာကြသည့် မန္တလေးမြို့ရှိ […]
ဧရာဝတီဘဏ်၏ (၇)ကြိမ်မြောက် Branch Development Meeting အား မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့January 10, 2017 AYA Bank ၏ (၇)ကြိမ်မြောက် Branch Development […]
ကရင်ပြည်နယ် ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသောစီးပွားရေး အသိပညာဆွေးနွေးပွဲတွင် ဧရာဝတီဘဏ်မှ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့January 10, 2017 ကရင်ပြည်နယ် ကုန်သည်များနှင့် […]
ဧရာဝတီဘဏ် နှင့် Myanmar Zarla Distribution တို့မှ ပူးပေါင်း၍ ခေတ်မီ Cashless solution ငွေပေးချေစနစ်များအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့January 10, 2017ဧရာဝတီဘဏ် နှင့် Myanmar Zarla Distribution တို့မှ […]
ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဘဏ် (၂၀ဝ)မြောက်ဖြစ်သည့် အလုံဘဏ်ဘဏ်ခွဲ ဖွင့်လှစ်ပွဲ အခမ်းအနားJanuary 5, 2017ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဘဏ် (၂၀ဝ)မြောက်ဖြစ်သည့် အလုံဘဏ်ဘဏ်ခွဲ […]
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဘဏ်ခွဲအသစ်များ နေရာအသီးသီးတွင် ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်December 15, 2016ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်သည် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဘဏ်ခွဲအသစ်များ […]
ဧရာဝတီဘဏ် နှင့် Myanmar Imperial College(MIC) တို့ ပူးပေါင်း၍ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက် Education Loan ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်ခြင်းNovember 9, 2016ဧရာဝတီဘဏ်သည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ ဘွဲ့နှင့် […]
ဧရာဝတီဘဏ် နှင့် Strategy First Institute တို့ ပူးပေါင်း၍ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက် Education Loan ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်ခြင်းNovember 4, 2016ဧရာဝတီဘဏ်သည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ ဘွဲ့နှင့် […]
AYA Financial Group မိသားစုဝင်များ၏ သီတင်းကျွတ်ဂါရဝပြုကန်တော့ပွဲ အခမ်းအနားကို ဧရာဝတီဘဏ်(ရုံးချုပ်) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့October 18, 2016AYA Financial Group မိသားစုဝင်များ၏ သီတင်းကျွတ် […]
Recent Posts	AYA Bank ၏ Customer များအတွက် Gala Dinner အား မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပ
ဧရာဝတီဘဏ်၏ (၇)ကြိမ်မြောက် Branch Development Meeting အား မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့
ကရင်ပြည်နယ် ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသောစီးပွားရေး အသိပညာဆွေးနွေးပွဲတွင် ဧရာဝတီဘဏ်မှ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့
ဧရာဝတီဘဏ် နှင့် Myanmar Zarla Distribution တို့မှ ပူးပေါင်း၍ ခေတ်မီ Cashless solution ငွေပေးချေစနစ်များအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့
ဧရာဝတီဘဏ်၏ ဘဏ် (၂၀ဝ)မြောက်ဖြစ်သည့် အလုံဘဏ်ဘဏ်ခွဲ ဖွင့်လှစ်ပွဲ အခမ်းအနား
About AYA	About us in brief
Corporate Governance	Mission
Corporate Governance and Report
Investor relations	Corporate News
Contact AYA Investor Relation
Join Us on : AYA BANK Call Center
© 2014-2015 Ayeyarwady Bank. All Rights Reserved.
Careers at AYA | iBanking
Another Creation of Media Lane.